Factory Centrifugal Pump - Mpanamboatra paompy Centrifugal China, mpamatsy
Paompy centrifugal mivelatra amin'ny sehatra tokana KQW
Ampiasaina amin'ny fividianana rivotra, fanafanana, rano fidiovana, fitsaboana rano, rafitra fanamafisana sy hatsiaka, fizarana rano, ary rano mangatsiaka tsy manimba ary fitaterana rano mafana eo amin'ny sehatry ny famatsian-drano, fanerena ary fanondrahana. Miorina tsy azo afehina anaty ranoka dia zava-dehibe, ny habetsahany dia tsy mihoatra ny 0,1% ny habetsaky ny singa, ny haben'ny sombiny <0.2mm.
D / MD / DF Paompy Centrifugal Multi-Stage
D Horizontal Multi-Stage Centrifugal Pump, MD tsy mahazaka paompy afovoany marobe ho an'ny fitrandrahana arintany sy paompy Centrifugal Multistage Dist-resistant an'ny DF. Noho ny fampiasana teknolojia mandroso sy famolavolana, D / MD / DF dia manana tombony maro. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro samihafa.
Paompy famahanana koba DG / ZDG
Ny paompy sentrifugal multistage DG misy fizarana multistage dia mampiasa bolt tension mba hampifandray ny fidiran'ny rano, ny fizarana afovoany ary ny fizarana outlet amin'ny vokatra iray manontolo. Izy io dia ampiasaina amin'ny rano fahana boiler ary rano madio hafa misy hafanana avo lenta. Ity andiany ity dia manana karazana vokatra marobe, noho izany dia manana fampiharana marobe. Ary koa, manana fampisehoana tsaratsara kokoa sy fahombiazana avo kokoa noho ny ambaratonga antonony izy io.
Model KQDP / KQDQ dia paompy booster mitsivalana marobe. Ny fitsitsiana angovo, fiarovana ny tontolo iainana, azo antoka ary azo itokisana no tena tombony. Izy io dia afaka mamindra karazan-dronono isan-karazany, ary azo ampiasaina amin'ny famatsian-drano, fanerena indostrialy, fitaterana ranon-javatra indostrialy, fivezivezena amin'ny rivotra, fanondrahana, sns. toe-javatra.
Paompy misaraka KQSN
Famatsian-drano avo lenta, fiarovana afo, fanamafisam-peo amin'ny rivotra ivoho afovoany, famatsian-drano mivezivezy amin'ny rafitra injeniera, fivezivezin'ny rano mangatsiaka, famatsian-drano vovo, famatsian-drano sy fantsakan-drano, fanondrahana, zavamaniry rano, zavamaniry taratasy, zavamaniry herinaratra, hafanana foibe famokarana herinaratra, zavamaniry vy, zavamaniry simika, tetik'asa fiarovana ny rano, famatsian-drano amin'ny faritra fanondrahana, sns.
Ho fanampin'izany, ny fampiasana fitaovana tsy mahazaka harafesina na tsy mahazaka dia afaka mitondra rano maloto sy ranomasina ary ranonorana misy rano mandevona misy fotaka mihantona.
Fitaovana mpamatsy rano KQGV (Booster Pump)
Ampiasaina amin'ny tranobe avo lenta, fiarahamonina, trano, hopitaly, sekoly, seranam-piaramanidina, fivarotana, hotely, tranon'ny birao sns.
Paompy Petrochemical KZA / KZE / KCZ
Ampiasaina amin'ny ankapobeny izy ireo fanadiovana solika, petrochemical, indostria simika, indostrian'ny fanodinana arintany, indostrian'ny taratasy, indostrian'ny ranomasina, indostrian'ny herinaratra, sakafo, fanafody, fiarovana ny tontolo iainana ary indostria hafa.
KQL Direct-mifangaro ao anaty tsipika Pompe Centrifugal Mitsivalana amin'ny sehatra tokana
Model KQL dia paompy sentrifugal mitsivalana an-tsipika tokana. Ampiasaina indrindra amin'ny rafitra fanamafisam-peo sy fanafanana izy ireo. Ny famolavolana firafitra tokana dia manome azy ny tombony azo antoka sy avo lenta.
Paompy famonoana afo XBD
Ampiasaina indrindra amin'ny asa famonoana afo amin'ny gorodona sy ny fanoherana ny fantsona.